क्लासिक व्यंग्य पुच्छर टाँस्ने उर्दी
आखिरमा म पनि पुच्छर किन्न बजारतिर दौडिन्छु र आफ्ना लागि एकथान पुच्छर किनेर ढुक्क बन्छु । नकिनेर के गर्नु, कुरै त्यस्तो छ । अहिले देशमा पुच्छर नहुने मानिस दुच्छर कहलाउने र हदैसम्मको हन्डर खानुपर्ने खण्ड आएको छ ।
कुरा के हो भने नगरनगरमा एउटा अनौठोको उर्दी भर्खरै जारी गरिएको छ । उर्दीमा अबदेखि घरबाट बाहिर निस्कँदा जोकोहीले आफ्ना जिउमा बाँदरको एकथान पुच्छर देखिने गरी टाँस्नैपर्ने बेहोरा रहेको छ । उपरमाथि थुपर भने झैँ हरेकलाई आफ्ना पुच्छरको टुप्पामा भएभरका परिचयपत्रका झुप्पा झुन्ड्याउनसमेत हेक्का गराइएको छ ।
उर्दी कडा मात्र होइन, ज्यादै कडा छ । उर्दीको अटेर गर्नेलाई फेला पार्नासाथ चौखु¥याउने र नेलसहित जेल हाल्ने सजाय तोकिएको छ । पुच्छर नटाँसी बुच्चो भएर बाहिर निस्कँदा पक्राउबलको कुनै छुच्चो प्राणी आफूलाई समाउन आइपुग्ने हो कि भनेर मैले बेलैमा पुच्छर खरिद गरेको हुँ ।
पुच्छर किनेर कोठामा फर्केदेखि मलाई त्यो लाम्चो र बाउँठो जिनिस एकपटक आफ्ना जिउमा टाँसेर हेर्न उपद्रै सकसक लागेको छ । सकसक लागेर उखुमै भएपछि मैले त कुन सड्का हो कुन सड्का, पुच्छर त आफ्ना जिउमा टाँसी पो हालेछु । कस्तो अचम्म ! जिउमा पुच्छर जडान गर्नासाथ मेरो मानसिक अडान मात्र होइन, मेरा कोठाको सारा सरसामान पनि सिनित्तै फेरिन पुग्छ । जुत्ता र मोजाको नाक फुटाल्ने कुइगन्धले नित्य निवास गर्ने कोठामा सयौँ धूपबत्ती बल्छन् र मेरा नाकमा मिठो बास्ना भरिन थाल्छ । एफएमको मधुर वाणीलाई आफ्नो फुच्चे रेडियोले ख्यारख्यार र घ्यारघ्यारमा रूपान्तरित गरेपछि मात्र सुन्न पाउने मेरा कानमा शंख र घण्टको चोखो धुन बज्न थाल्छ । धेरै वर्षदेखि रङरोगनको मुखै देख्न नपाएर धुस्रे र फुस्रे भएको कोठामा दलिन र भित्ताहरू एक्कासि तेजिलो भएर अचम्मसँग चम्किन थाल्छन् । मेरा चिम्सा पर्दै गएका जोर आँखाले कोठाको भित्तामा एउटा रहस्यमय विराट छाया सर्लक्क पलाएको देख्छन् ।
छायालाई देख्नासाथ मेरो अन्तरकुन्तरमा श्रद्धाभक्तिको झोलिलो पदार्थ मुहान फुटाएर रसाउँछ र गद्गद् भएर म भित्तामा स्थित छायाका सम्मुख आफ्नोे टाउको लत्रक्क निहुराउँछु । मेरा जम्ल्याहा हात श्रद्धाको बाक्लो लीसामा लिपिस्सै टाँसिएर एकवत् भावले जोडिन्छन् । म देब्रे घुँडा मारेर जन्मजात चाकरका मुद्रामा थपक्क बस्छु र नवजडित पुच्छरलाई सक्तो मास्तिर उचालेर टुप्पामा घुमर्क्याउँछु । म आफ्ना बोलीमा सखरका डल्लाहरू घोलेर मिठो आवाज पोख्छु, “ओहो, प्रभु यहाँ ?”
“हो वत्स, म यहाँ !” छायाको टुन्याउने बोलीले मेरो मनमथिंगलमा झ्वाम्मै मुहुनी लगाउँछ ।
“म धन्य भएँ, प्रभु !” भावातिरेकमा कामेका मेरा ओठबाट लट्ठ परेकोे स्वर निस्किन्छ ।
“तिमी अझै धन्य हुन पाउनेछौ, वत्स !” छायाले मतिर फालेका रसवरीजस्ता शब्दहरूले मलाई गुलियोप्रेमी झिँगा झैँ लोभ्याउँछन् ।
“कसरी, प्रभो !” म रसवरीको चासनीमा चिप्लेर लडे झैँ गरी मुख मिठ्याउँदै प्रश्न गर्छु ।
“यो फारम हो, वत्स !” छायाको ओठमा हलुका मुस्कान अलि–अलि इतरिँदै खेल्न थाल्छ ।
“कस्तो फारम, प्रभु ?” सालनालमा बेरिएको बिचरो भ्रुणझैँ म अज्ञानताको पाठेघरबाट चिच्याउँछु ।
“त्यो वत्स, प्रजातन्त्रको प्रवद्र्र्धनका निम्ति प्रारम्भ गरिने मर्यादित निर्वाचनको प्रायोजनका लागि प्रयुक्त हुने फारम हो !” छायाका मुखबाट निस्केको छर्राको पर्राले मेरो जिउभरि मकै भुट्छ ।
मचाहिँ निर्वाचन शब्द सुन्नासाथ जुलुसले उचालेको पुत्ला झैँ लल्याकलुलुक पर्छु । सर्वांग भएर म आच्छु–आच्छु पर्छु । उखेलेर एकातिर हुर्याउँछु । त्यसो गर्नासाथ मेरो मुटुभित्र गानिएको तनाउ स्वाट्टै हराउँछ । साथै, साबिक ढाँचा–काँचामा फर्केर कोठाले पनि उही तन्नम रूप धारणा गर्छ । धूपबत्तीको चन्दने मगमग मासिएर फेरि जुत्तामोजाको मन्द गन्धयुक्त झोक्का रुमलिन थाल्छ । शंख–घण्टको सुरिलो ध्वनिका सट्टा फेरि उही फुच्चे रेडियोको कर्कश ध्वनिसर्कसले कानका पर्दामा सियो घोच्न थाल्छ । भित्तामा प्रकट भएको विराट छाया मुलुकको शान्ति हराएझैँ एकदमै बेपत्ता हुन्छ र कोठामा उही धुस्रेफुस्रे रङरोगन मात्र बाँकी रहन्छ । जे होस्, म त्यस छायाको रहस्यमय कब्जाबाट मुक्त भएकोमा सारै सन्चो मान्छु र निर्धक्क भएर लामो सास फेर्छु ।
त्यसपछि एक छिन बित्छ, दुई छिन बित्छ र मलाई विस्तारै फारमबारे अलि खुलस्त कुरो बुझ्ने खसखस लाग्छ । छायाका मुखबाट निर्वाचन शब्द सुनेर म केही बेरपछि आत्तिनुपर्ने थियो, अलिछिटो आत्तिएछु । कुरो बुझ्न अति नै चौ–चौ लागेपछि म अघि मिल्काएको पुच्छर भुइँबाट टिप्छु र कत्ति नहडबडाई आफ्ना जिउमा गाँस्छु ।
पुच्छर गाँस्नासाथ फेरि उही धूपबत्तीको चन्दनवन हरर्र सल्किन्छ । फेरि, उही शंख–घण्टको सुरसप्तक घनन्न घन्किन्छ । भित्तामा फेर उही विराट छायाको सनसनीपूर्ण दाखिला हुन्छ र म फेरि देब्रे घुँडा मारी अनन्य सेवकको भंगीमा अँगालेर थुचुक्क बस्छु । विनीत भावले दुवै हात जोडेर म सुस्तसुस्त आफूभित्रका कुरा बाहिर काढ्छु, “मैले अघि लघुशंकाले च्यापेर बीचमै कुरो टुटाउने घिङ्न्याइँ गरेँे, माफ पाऊँ प्रभु ! मैले माफ पाएँ भने प्रभु, मनमा पोको पारेर राखेको सानो बिन्ती बिसाउने थिएँ ।”
“तथास्तु वत्स, मैले तिमीलाई क्षमा गरेँ । मसँग तिमी कत्ति पनि धक मान्नुपर्दैन, जे भन्नु छ निर्धक्क भएर भन ।” छायाको उदार वचन सुनेर मेरो अति नै ढुकढुकाएको मुटुको चाल अलिकति भए पनि मत्थर हुन्छ ।
“प्रभु, हजुरले अघि मलाई एउटा फारम दिनुभएको थियो । त्यो कस्तो फारम थियो, प्रभु ?” अझै धकमा लकपक गर्दा आफ्नोे बक म बल्लतल्ल फुटाउँछु ।
“वत्स, त्यो त निर्वाचनमा उठ्ने प्रत्यासीले नामांकनका लागि भर्नुपर्ने फारम थियो । तर, अहिले नगरनगरमा त्यसको पूरै वितरण भइसकेको छ । सुन वत्स, मैले तिमीलाई योग्य मान्छे ठानेर एउटा नगरको प्रत्यासी बनाउन त्यो फारम दिएको थिएँ । तर, अब त्यसको आवश्यकता रहेन । मैले तिम्रो ठाउँमा तिमै्र छिमेकीलाई प्रत्यासी बनाएँ ।” छायाका मुखबाट सुत्तसुत्त निक्लेका सबै शब्दकनसुत्लाहरू मेरा कानमा पसेर बेसरी चलमलाउँछन् ।
“मैले अघि नै निवेदन गरिहालेँ नि प्रभु, मलाई त्यो जाबो लघुशंकाले ठूलो अलमलमा पा¥यो भनेर !” आफ्नोे दीन र मलिन खाप्चो माथि उचालेर म मनको व्यथा सुसाउँछु ।
“लघुशंका होइन दीर्घशंका भन, वत्स ! तिमी अहिले बहिस्कारको बाटातिर लागेजस्तो छ नि !” छायाको स्वर अलिक व्यंग्यतिर ढल्किँदै जान्छ ।
“प्र्रभुका नजरबाट के नै लुकेको छ र ?” निराशाले बोझिलो तुल्याएको स्वर निकालेर म बाटिएको डोरी झैँ भित्र–भित्रै बटारिन्छु ।
“निराश नहोऊ वत्स, तिम्रा लागि यो पेटिका जोगाएर राखेको छु !” काटेको घाउमा मलम लगाउनेजस्ता शीतल–शीतल शब्दहरू सुनेर म केही आश्वस्त हुन्छु ।
“सुुन र चाँदीले मोरिएको यो कस्तो पेटिका हो, प्रभु !” पेटिका समाएर त्यसको कलात्मकतामा मुग्ध हुँदै म सोधनी गर्छु ।
“यो नवीनतम मतपेटिका हो, वत्स ! यसलाई लिएर दैला–दैलामा जाऊ र प्रजातन्त्रको भजनकीर्तन सुनाएर जनतासँग मतको बिटो मागेर ल्याऊ । सुन वत्स, मैले त्यस्ता मतका अधिकतम बिटाहरू बटुल्ने संकल्प गरेको छु ।” भन्दा–भन्दै छायाको अनुहार कठोर र स्वर कडा हुन थाल्छ ।
त्यो सुन्नासाथ म फेरि अचाक्लीसँग आत्तिन्छु । यसपटक पुच्छर उक्याउनतिर नलागी म दोब्र्याएको देब्रे घुँडो सोझ्याएर जुरुक्क उभिन्छु । भक्तिभावले जोडिएका दुवै हात फट्याएर मुठी बटार्दै हावामा उचाल्छु । माथि उचालिएको पुच्छर लुलो पार्दै वेगसाथ भुइँमा बजार्छु र स्वरलाई भयानक पारेर चिच्याउँछु, “बल्ल मैले बुझेँ, बाँदरको पुच्छर टाँस्न जारी गरिएको उर्दीको अर्थ ! याद रहोस्, जसरी पहेँलाजति सबै सुन हुँदैनन्, त्यसैगरी पुच्छर टाँस्ने जति सबै हनुमान हुँदैनन् ।”
यति भनेर आक्रोशको हुरी–बतासमा बग्दै म आफ्ना जिउमा टाँसेको पुच्छर लुछेर मिल्काउँछु र उर्दीको बेवास्ता गरेर पुच्छरबिनै बाहिर निस्कन्छु ।